Toro-hevitra momba ny fanamafisana sary avy amin'ny Semalt
Miaina eo amin'ny tontolo hita maso isika, ary ny dikan'ny sary fanavaozana dia tsy azo odian-tsy hita. Ny sary avo lenta dia mahatonga ny tranokalanao ho mampiavaka kokoa ary mitondra fiara be dia be. Raha tsy misy ny votoaty sy ny fanatsarana sary dia mety tsy hahazo ny vokatra irinao ianao. Ny fanatsarana sary dia mahasoa amin'ny fomba maro, ohatra, manome azy ny fahaizan'ny mpampiasa tsaratsara kokoa, manatsara ny fotoana entin'ilay pejy anao ary manolotra safidy tsara kokoa. Ny teknolojian'ny fikaroham-pitadiavana dia nanao ezaka goavana nandritra ny volana vitsy, ary ny karazana fitadiavana dia tsy afaka hamantatra ny votoatin'ny sary - x deflate. Noho izany, miankina amin'ny lahatsoratry ny saryo izy ireo mba hahafantarana ny momba ireo sary sy ny fomba ifandraisany amin'ny lohahevitra na lahatsoratra. Ireto ny sari-dalan'ny fanatsarana sary ho an'ny webmasters sy bilaogera natolotr'i Max Bell, mpitantana ny Success Successor Semalt .
Ny sary dia tsy afaka manampy amin'ny SEO:
Raha tianao ny haka sary anao ao amin'ny tranokala, dia tokony hanana fahafahana miditra amin'ny sary ianao. Fa ny sary misy tahiry dia tsy afaka manampy amin'ny SEO satria tsy maintsy manohy miaraka amin'ny pejy SEO sy SEO an-tsipika. Maro ireo tranokala no mitambatra amin'ny sary misy tahiry, ka tokony hieritreritra momba ireo sary tsy manam-paharoa sy manintona izay mbola tsy nampiasaina. Na dia sarotra kokoa aza ny sary tahiry, dia hanana vokatra mitovy ihany koa izy ireo na tombony SEO toy ny sary nalaina voalohany.
Ampiasao sary tsara tarehy:
Zava-dehibe ny mampiasa sary tsy manam-paharoa sy avo lenta amin'ny lahatsoratra rehetra. Ny sary manjavozavo kokoa ampiasainao, ny tsara kokoa dia ny fitsinjovana anao dia ny filaharana amin'ny milina fikarohana..Ny sary tany am-piandohana dia midika fa tokony hampiasa sary tsy misy copyright. Raha tsy manana fahafahana miditra amin'ny Shutterstock na Getty Images ianao dia afaka maka sary an-tsarimihetsika mampiasa fakantsary. Omeo fanazavana maro momba ny marikao ny mpitsidika anao, ary tsy misy afa-tsy amin'ny horonan-tsary sy sary mahatalanjona hita maso.
Omeo ny fijerinao ny orinasa ny mpanjifanao, na manome sary tsara tarehy mety ho entin'ny mpitsidika anao.
Maro ny mpisera tsy miraharaha ny sarimihetsika. Ny sary avo lenta sarobidy dia mamela anao hitsahatra amin'ny valin'ny fikarohana, asehoy ny toetran'ny marikao ary asio olona maromaro ao amin'ny tranokalanao.
Mitandrema amin'ny copyrights:
Na inona na inona sary nalainao, dia tokony ho azonao antoka fa afaka ampiasaina ireo sary, ary tsy misy fifanoherana momba ny copyright. Raha manana fahafahana miditra amin'ny Shutterstock, Getty Images, DepositFiles na sehatra hafa mitovy amin'izany ianao, dia azonao atao ny mampiasa sary maro araka izay tianao ary tsy manahy momba ny fifandonana momba ny zon'ny mpamorona. Fa raha tsy manana fahazoan-dalana hampiasa ny sarin'izy ireo ianao, dia tsy maintsy miatrika fitsarana ianao. Ao amin'ny DMCA (Digital Millennium Copyright Act), ny mpampiasa dia tsy afaka mampiasa ny votoatin'ny olona sy ny sary raha mety manitsakitsaka ny zon'ny mpamorona.
Ny JPEG dia tsara indrindra:
Misy karazana sary hafa, fa JPEG no endrika tsara indrindra sy ampiasaina. Manome safidy maro ho an'ny fitazonana ny kalitaon'ny sarinao amin'ny fampitomboana na famorahana. Afaka milalao amin'ny loko, ny lamina, ary ny aloka ianao mba hahazoana antoka fa ny sary farany dia mitovy amin'ny layout misy anao sy ny votoaty. Marina fa sarotra ny manoritra ny sarin'ny JPEG ary azo ampiasaina amin'ny haben'ny kely sy lehibe.
Raha momba ny SEO, zava-dehibe ny manonona ny sary. Tokony hamorona anaran-tsarimihetsika misy anao ianao ary hametraka antoka fa ny teny fanalahidy fototra dia nampidirina amin'ireo anarana ireo. Google, Yahoo ary Bing dia hitsikilo mora foana ny votoatiny sy ny sary raha toa ka ampiasaina tsara ny teny sy ny fehezanteny.